Xikmadaha Cajiibka Ah Ee Maanta.
Tuesday 18th May 2021 09:10:14 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Waxa la waydiiyay Imaam Ahmed (Allah U Naxariitee) Qofka banii'aadamka ahi goorma ayu daal iyo shaqo ka nasanayaa ?
Waxa la waydiiyay Imaam Ahmed (Allah U Naxariitee) Qofka banii'aadamka ahi goorma ayu daal iyo shaqo ka nasanayaa ? Waxaana uu ku jawaabay " Marka uu lugta u horaysa Janada la galo ayuu ka nasanayaa " Allah ha inagu arsaaqo janadiisa.
Nin dadkii wanaagsana ee hore ka mid ahaa ( Salafu Saalix) ayaa yidhi " Haddii aad la kulanto, qudhaanjo godkeeda ku socota haku joogsan, adigoo dar Allah (sw) arinkaasi u samaynayaa”. Waxaana laga yabaa in Allah (sw) kuugu naxariisto sida aad iyadaba ugu naxariisatay.
" Haddii aad soo marto Shimbir biyo cabaysa, iska jir inaad u dhowaato oo aad cabsi ku abuurto, adigoo arinkaasi Allah dartii u samaynaya, waxaana laga yabaa in maalinta Qiyaame Allah (sw) ku magan geliyo arinkaasi. " Hana yarysan wanaag, ma garanaysid kan jano aad ku gelyasee.
Xikmadaha Maanta 2
[Top Secret:-] Maxaad Ka Ogtahay Astaamaha Murashaxiinta Ee Cajiibka Ah Taas Oo Xisbiyada Qaar Diideen ?
Hal Ku Dhigyada Cajiibka ee Sheekh Mustafe Xaaji Ismaaciil Haaruun qaar ka mid ah hoos ka akhriso:-
Adeege: Madaxweyne (Huuro kiiniyaata) marti socdaal dheer kuu soo gashay baa joogtaa maanta.
[Warbixin-] Shirka Guddiyada Farsamo Ee Wada Hadalada Oo Jabuuti Ka Furmey Iyo Jewiga Shirka Ee Maanta.